गधासँग सेक्स गर्ने अनौठो रीति ! | Jukson
गधासँग सेक्स गर्ने अनौठो रीति !
एजेन्सी। विश्वका विभिन्न स्थानमा सेक्स सम्बन्धी अनौठो परम्पराहरु रहेका छन् । त्यस्तै एक अनौठो परम्परा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । विश्वका धेरै देशमा जनावरसँग सेक्स गर्नु अपराधको श्रेणीमा पर्छ । तर, विश्वका केही यस्ता देश छन्, जहाँ जनावरहरुसँग सेक्स गर्ने परम्परा रहीआएको छ ।
केही समयअघि गधासँग सेक्स गर्ने अनौठो परम्पराको खबर बाहिर आएको थियो । उत्तरी कोलम्बियामा गधासँग सेक्स गर्ने अनौठो रीति रहेको छ । त्यहाँका पुरुषहरु गधालाई समाउँछन् र गधासँग सेक्स गर्छन् । कोलम्बियामा यो सामान्य कुरा मानिन्छ । त्यहाँका मानिसहरु यसलाई आफ्नो रीतिरिवाज ठान्छन् । त्यस्तै अहिले भने अर्को खबर सार्वजनिक भएको छ । लेबनानमा एक परम्परा अनुसार पुरुषहरुलाई पोथी जनावरकासाथ सेक्स गर्ने छुट छ । त्यहाँ पोथी जनावरसँग सेक्स गर्नुलाई पुरुषत्वसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।
त्यहाँ पोथी जनावरसँग सेक्स गर्ने पुरुषलाई ज्यादा ताकतवर मानिन्छ । तर, यसको विपरित त्यहाँ कसैले भाले जनावरसँग सेक्स गरेको देखियो भने उसलाई सोझै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइन्छ।
ड्राइभर बिना नै चल्ने गुगल कार बससँग ठोक्कियो
सुनमा एक सय र चाँदीमा ५ रुपैंयाँको गिरावट
ट्रम्पको धम्कीका बाबजुद राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा अमेरिकी निर्णय अस्वीकार